Xulka Bari oo 4-0 kaga badiyey Bakool, iyo Mudug oo 1-0 kaga badiyey Gedo; Bari & Mudug oo u gudbay wareega 2-aad ee ciyaaraha (taswiir). – Radio Daljir
Diseembar 20, 2010 12:00 b 0
Garowe, Dec 20 – Ciyaarihii maanta oo xiiso gaar ah wada lahaa ayaa waxaa ciyaartii hore isku arkay labada xul ee Mudug & Gedo; labadan Xul ciyaaro ayaa horay u soo ciyaareen waxaa ay soo galeen barbaro Groupkan (B) oo ah Groupka Geerida ayaa ciyaar shalay dhaxmartay labada Xul ee Sool iyo Banaadir inkastoo ay bar baro galaaen hadana waxaa lada sugayay Ciyaartan iyo Xulka hogaamin doono.
Ciyaartan Mudug iyo Gedo ayaa waxaa qeybtii hore ee Ciyaarta waxaa labada xul ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan oo weerar iyo weerar celis waxaana Xulka Gobolka Mudug u suurto gashay qeybtii hore ee ciyaarta gool rigoore ah oo aad u qurux badan in ay ka dhaliyaan Xulka Gobolka Gedo walow Xulka Gedona ay Rigoore helaan Balse ay iska beeldareeyeen Si kastaba qeybtii hore ee Ciyaarta 1-0 ayay ku soo dhamaatay oo ay ku gadisay Xulka Gobolka Mudug.
Qeybtii 2-aad ee ciyaarta ayaa durbaba laysugu soo laabtay inkastoo ciyaarta waxba aysan iska badalin waxaana labada xul ay isku dayeen in ay goolal iska dhaliyaan, balse taasi ma noqon mid hirgasha.
Ciyaartii u dhaxeysay Mudug & Gedo ee Groupka B waxaa ay ku soo gabagabowday 1-0 oo waxaana hada Hogaanka u qabay Groupkan (B) xulka gobolka Mudug oo 4 dhibcood leh halka Sool iyo Banaadir ay min 2 dhibcood ay leeyihiin, Gedana waxaa ay leedahay 1 dhibic.
Ciyaartii xigtay oo isha lagu wada hayey ayaa waxaa wada ciyaaray xulalka Bari & Bakool oo kuwada jira Groupka (C); ciyaartoyada Xulalkan ayaa waxaa ay la soo shartageen galabta ciyaaro isku dheeli tiran oo labada xulba xirfado sareeyo ayay sameynayeen qeybtii hore ee ciyaarta labadan Xul, Xulka Bari haduu badiyo rajo ayuu ka qabaa u soobaxida wareega 8da Bakoolna hadii laga badiyo rajo fiican malahan oo waa ay harayaan, kulankii hore labada Xulka Bakool waa ay iska soo beel dareysay waana laga soo badiyay balse Bari waa ay soo badisay.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxaa ay ahayd weerar iyo weerar celis inkastoo fursado badan oo Goal laga filan karo ayay iska beel dareyeen Xulka Gobolka Bari walow aysan ka liidan Bakool, ciyaarta qeybtii hore markii ay wax yar ka harsantahay ayaa Xulka Gobolka Bari fursad u heleen Goal Bilisiyon ah waxaa ay ku soo dhamaatay qeybtii hore 1-0 oo ay hogaanka ciyaarta ku haysay Gobolka Bari.
Qeybtii 2-aad ee ciyaarta ayaa laysugu soo laabtay waxaana lagu bilaaway ciyaar dar dar badan oo ay labada dhinac midba mida kale ku dooneyso in ay dhibcaha xageeda soo maraan, balse taasi waxaa ay u suurto gashay xulka gobolka Bari oo goolkii 2-aad ka dhaliyay xulka Bakool, kaasoo ciyaarta ka dhigay 2-0 oo ay hogaanka ku sii hayso xulka Bari.
Labada Xul qaybtii labaad ee ciyaarta isbadalo dhinaca ciyaartoyda ayay sameeyeen walow Xulka Bari ay taasi fursad u heleen in ay ciyaarta inteeda badan maamulaan, waxaana weerar xoogan la saaray goolka xulka Bakool; goolkii 3-aad ayay dhaliyeen xulka Bari wax ka yar 2 daqiiqo ka dibna; sidoo kale goolkii 4-aad ayay dhaliyeen xulka gobolka Bari. Ciyaartiina waxaa ay ku soo gabogabowday 4-0 oo ay guusha ku raacday xulka bobolka Bari.
Groupka (C) waxaa iminka hogaanka u haysto xulka gobolka Bari oo leh 3 dhibcood.
J. Dhexe vs Sh. Dhexe
Baay vs Sanaag
Hiiraan oo rajo beel ku riday Sh. Hoose (3-2) & Banaadir iyo Sool oo barbardhac (1-1) ku kala tagey.